16 Core ဂိတ် သတျတော ထုတ်လုပ်သူများ နှင့် ပေးသွင်းသူများ - တရုတ် စက်ရုံ - MELONTEL
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဖိုင်ဘာ အမြင် > ဖိုင်ဘာ အမြင် ဂိတ် သတျတော > 16 Core ဂိတ် သတျတော
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အမြန်အသေးစိတ် မူရင်းအရပ် - Zhejiang, China (Mainland)တံဆိပ်အမည်: Yuhuiမော်ဒယ်နံပါတ်: YH-1068-16ကုန်ပစ္စည်းအမည်: 16 core FTTH Terminal အကွက်အမျိုးအစား: အပြင်မှာ & မိုးလုံလေလုံပစ္စည်း: PCအရွယ်အစား: 31.5x24x11.5cmစွမ်းဆောင်ရည်: ၂၄ ပီစီ SC သို့မဟုတ် LC duplex adapterအရောင်: Greyope......
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: 16 core FTTH Terminal အကွက်
စွမ်းဆောင်ရည်: ၂၄ ပီစီ SC သို့မဟုတ် LC duplex adapter
အလေးချိန် - 1.55kg / pcs
16 သော့ခတ် IP65 ရေစိုခံခရမ်းလွန်ကာကွယ်မှုနှင့်အတူ Core Core အပြင်ဘက် Fiber Optic Terminal box
1. အသုံးပြုသော ABS ပစ္စည်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အားသန်စွမ်းမှုနှင့်အလင်းကိုသေချာစေသည်။
၅။ အရွယ်အစား - ၃၃၅ မီလီမီတာ x ၂၅၀ မီလီမီတာ x ၁၀၀ မီလီမီတာ (W x H x D)
6. Adapter စွမ်းရည်: 24 SC / FC ကို simplex adapters သို့မဟုတ် LC duplex adapters
၇။ Cable ဝင်ပေါက် - ၂
အသုံးပြုသော ABS ပစ္စည်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အားသန်စွမ်းမှုနှင့်အလင်းကိုရရှိစေသည်။
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအဆင့် - IP55 ။
လွယ်ကူသောတပ်ဆင်မှုများ - နံရံကပ်တပ်ဆင်ရန်အသင့်ရှိပြီဖြစ်သည်။ တပ်ဆင်ရန်တပ်ဆင်ထားသည်။
မတူညီသောအရွယ်အစားအရွယ်အစားရှိသောအရွယ်အစားအရွယ်အစားနှင့်ကိုက်ညီရန်ချိန်ညှိနိုင်သည့် adapter သည် slotused ဖြစ်သည်။
splicing အတွက်အောက်ပိုင်းအလွှာ, အသေးစား splitter အဘို့အသင့်လျော်သည်။
အထက်အလွှာ foradapters, connectors နှင့်ဖိုင်ဘာဖြန့်ဖြူး။
ပြင်ပ optical ကေဘယ်ကြိုးတပ်ဆင်ပေးသည်။
cable ကိုဂလင်းများနှင့်လည်စည်း - ထုပ်ပိုးနိုင်နှစ် ဦး စလုံး။
ကြိုတင်ချိတ်ဆက်ထားသောကေဘယ်ကြိုးများ (အမြန်ချိတ်ဆက်သူများနှင့်ကြိုတင်ဆက်သွယ်ထားခြင်း) ထောက်ပံ့သည်။
ကွေးအချင်းဝက်ကာကွယ်ထားနှင့် cable ကိုလမ်းကြောင်းများထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
အရွယ်အစား: ၃၃၅ မီလီမီတာမှ ၂၅၀ မီလီမီတာ x ၁၀၀ မီလီမီတာ (W x H x D)
အလေးချိန် - 1.33 ကီလိုဂရမ်
Adapter ကိုစွမ်းရည်: 24SC / FC simplex adapters သို့မဟုတ် LC duplex adapters ။
cable ကိုဝင်ပေါက်: 2
Cable Exit: Simplex Drop Cable ၂၄ ခု (ကြိုတင်ဆက်သွယ်ထားသောကေဘယ်ကြိုးများထောက်ပံ့သည်)
12core (8 core, 12core, 16core, 24core, 48coreis ရရှိနိုင်)
hot Tags:: 16 Core ဂိတ် သတျတော, တရုတ် 16 Core ဂိတ် သတျတော, 16 Core ဂိတ် သတျတော စက်ရုံ, 16 Core ဂိတ် သတျတော ထုတ်လုပ်သူများ, 16 Core ဂိတ် သတျတော ပေးသွင်းသူများ, 16 Core ဂိတ် သတျတော စျေးနှုန်း, ဝယ်ပါ 16 Core ဂိတ် သတျတော, စိတ်ကြိုက် 16 Core ဂိတ် သတျတော
16 Core ဖိုင်ဘာ အမြင် ဂိတ် သတျတော